Ungayivuselela kanjani i-Kindle yethu ngesandla | Onke ama-eReaders
I-eReader ehamba phambili
Ungayivuselela kanjani i-Kindle yethu ngesandla
UJoaquin Garcia | | Amazon Kindle, Ama-eReaders, Software, Izifundo zomusa
Lesi umhlahlandlela omfushane wezibuyekezo zedivayisi yohlobo Kindle. Kokubili mina ne-Todo eReaders asikunaki okungenzeka kudivayisi yakho. Ngaphambi kokwenza noma yini, funda wonke umhlahlandlela bese uwubukeza. Ngasekuqaleni kwaleli sonto, i-Amazon ikhiphe izibuyekezo zamadivayisi ayo lapho kufaka phakathi ukufakwa kweGoodreads ne-eReader. Umhlahlandlela usebenza kunoma iyiphi idivayisi ye-Kindle, njengoba ukufakwa mathupha kuma-eReaders nakumathebulethi kwenziwa ngendlela efanayo. Ngaphambi kokuqhubeka nomhlahlandlela, ngazise ukuthi ngenze ukubuyekeza okwenziwa ngesandla ku-Kindle Fire wami futhi kunginike iphutha. Ngizamile ngqo faka inguqulo 11.3.1 okuyiwona oqukethe ukufakwa kwamaGoodreads. Ngenhlanhla, ukufakwa akukwenzi izinguquko ezinkulu kudivayisi yami nange- setha kabusha Kube ngokwanele ukumbuyisa emsebenzini, kepha umsebenzi wami ukukwazisa ukuze wazi.
Yini esiyidingayo ukuze sibuyekeze mathupha
Idivayisi yomusa ekhokhiswe ibhethri elingu-100%.
Intambo ye-usb yokuxhumana no-Kindle ne-pc.
Abashayeli abafake kahle i-PC ukubona i-Kindle.
Into yokuqala ukuthi ube ne- Kindle ngebhethri elingu-100%Akunandaba ukuthi i-Kindle iyini nokuthi izothatha isikhathi eside noma cha. Uma kunokuhluleka kwamandla, i-Kindle ishiywa njengesitini, ngakho-ke kubalulekile ukuthi ibhethri libe ku-100%, ukuphepha. Lapho sesiqinisekisile le mfuneko, kubalulekile ukuthi i-pc yethu ixhumane no-Kindle, okungukuthi, lapho sixhuma i-Kindle, izofunda i-pc njengenyunithi eyodwa yokugcina, ebonakala ngaphansi kwama-hard drive esimweni seWindows. Ngalesi sizathu, kubalulekile ukuthi ufake ama-Amazon driver. Uma ungenazo, ungakwazi zilande kusuka kulesi sixhumanisi.
Uma sesinezidingo ezingenhla, sizokwenza kanjalo le webhu futhi sibheka inguqulo yakamuva yeSoftware. Uma kwenzeka kuba I-Kindle Paperwhite ingu-5.4.2 kuthi ku-Kindle Fire ingu-11.3.1. Uma sinalezi zinguqulo, asikwazi ukubuyekeza njengoba kuyizinguqulo zakamuva. Uma sinezinguqulo eziphansi, okujwayelekile kakhulu, singaqhubeka nokuvuselela i-Kindle.
Kepha ngazi kanjani ukuthi iyiphi i-Kindle yami enayo?
Ukwazi inguqulo esinayo, siya ku-Kindle wethu kumenyu «Idivayisi»Kusukela kumenyu yezilungiselelo zomusa bese ubheka inketho«mayelana»Endabeni yoMlilo Womusa, kutholakala kunketho«Okuningi»Kusuka kubha ephezulu. Eduze kwenguqulo uzothola inkinobho ethi «Buyekeza Kindle»Okukhubazekile, okungukuthi, sicindezela esikucindezelayo akwenzi lutho. Le nkinobho ibalulekile ngoba izonikwa amandla ngokuhamba kwesikhathi.
Lapho sesiqinisekisile ukuthi sidinga ukuvuselelwa, siya ku- le webhu futhi silanda iphakheji yokuvuselela, silanda leyo ehambelana nemodeli yethu. Manje njengoba sesinephakheji yokubuyekeza, siyikopisha bese siyinamathisela kufolda «Isitoreji sangaphakathi»Kusuka ku-Kindle wethu, lokhu sikwenza nge-PC, ukuba ne-Kindle exhunywe ngekhebula. Lapho sesiqedile ukukopisha iphakheji yokuvuselela sikhipha ikhebuli futhi siphatha kuphela i-Kindle. Manje siya esikrinini lapho satshelwa khona ngenguqulo ebesiyifakile futhi sizobona ukuthi i- «Buyekeza Kindle»Manje isiyasebenza futhi isebenza kahle, njengoba siyicindezela bese kuqala ukufakwa.
Phakathi nale nqubo idivayisi ye-Kindle izoqala kabusha amahlandla amaningi, ungakhathazeki, ingakunika iphutha, njengoba kwenzekile kimi, isixazululo sitshelwa yidivayisi uqobo lwayo, kepha engikwenzile ukuvala i-Kindle futhi ngibuyele emuva ukuyivula, konke kusuka kunkinobho evaliwe. Uma ungakatholi iphutha, siyakuhalalisela, usuvele unaso isibuyekezo esisha esilungele ukusebenza. Ukuqedela, ukukutshela ukuthi lokhu kubuyekezwa okwenziwe ngesandla kwenziwa ngamaphakeji asemthethweni we-Amazon, ngakho-ke uma sine-Kindle yethu egxilile, ikakhulukazi uma ku-Kindle Fire, idivayisi yethu izolahlekelwa yileyo mpande ngemuva kokuvuselelwa okwenziwa ngesandla. Ngakho-ke cabanga ngaphambi kokwenza isibuyekezo uma ucabanga ukuthi sikufanela noma cha. Hhayi-ke, uma unanoma yimiphi imibuzo maqondana nesifundo noma ibuyekezwe kuphela, phawula ngayo ku-athikili, kuyasiza.
Imininingwane engaphezulu - AmaGoodreads nakanjani ajoyina umndeni wakwa Kindle, Xda-Onjiniyela,
Indlela ephelele ye-athikili: Onke ama-eReaders » izinkampani » Amazon Kindle » Ungayivuselela kanjani i-Kindle yethu ngesandla
Ama-eReaders amahle kakhulu
Sebenzisa leli thuba uthole ama-eReaders amahle kakhulu emakethe ngamanani akhanga kakhulu
I-Kindle OutletI-Kindle PaperwhiteI-Oasis yomusa
Amazwana ayi-13, shiya okwakho
kwenza iminyaka 8
I-kindle paperwhite yesizukulwane sokuqala ayifaki ama-goodreads, ngivuselele eyami ngesonto eledlule futhi akukho lutho lwalokho olubonakala kimi. Uhlobo lwakamuva lwesizukulwane sokuqala i-KP ngu-1 🙁
Imayini ingenye yezintsha futhi isithonjana se-goodreads asiveli, ingabe le nsizakalo ingeyezinhlobo zaseMelika?
Nginenguqulo yaseMelika futhi isibuyekezo sokugcina esingiphonsayo ngu-5.3.9
Angikazami ukubuyekeza kepha ngifunde ukuthi amaGoodreads asebenza e-United States kuphela.
UJoaquin Garcia kusho
Sanibonani nonke. Isixhumanisi esikule ndatshana yinguqulo yaseMelika, kepha akunandaba, uhlelo luyefana nolwezingcingo eziphathwayo, ifayili lifakwa bese kuthiwe idivayisi iyilayishe. Okungenandaba yinkinga yezinguqulo, kufanele ubone ukuthi idivayisi yakho inguhlobo oluphansi okungenani kunolo i-Amazon elubeka kuwebhusayithi yayo. Okwamanje kumenyezelwe izibuyekezo zomlilo omusha we-Kindle, we-Kindle Paperwhite ka-2013 kanye ne-Kindle Fire yesizukulwane sesibili, yize lena ngiyizamile futhi ukubuyekeza kunika iphutha. Kokunye ngiyaqiniseka ukuthi isibuyekezo sizophuma kepha angazi ukuthi kungenzeka nini, noma ngabe sesivele sikhona noma kuze kube yilapho kwethulwa idivayisi elandelayo, hhayi lena, eyaziwa yi-Amazon kuphela. Uxolo ngokungakwazi ukucacisa kakhulu, ngithanda. O futhi ngiyabonga ngokufunda nokusilandela.
Phendula uJoaquín García
Enguqulweni yaseMelika, uthini uma ama-goodreads egijima?
kwenza iminyaka 7
Ngisanda kuthenga i-Kindel yesizukulwane sesibili, lapho kunyamalale khona isithonjana sebhalbhu encane, esetshenziselwa ukukhanyisa isibuko nokulinganisa amandla okukhanya. Ngenze konke engingakwenza ngaphandle kokubuyisa leso sithonjana, ukuvuselela, ukuqala kabusha, ukusetha kabusha; esimweni ngasinye kuze kube izikhathi eziyisithupha. Ngaphandle kwalesi sisetshenziswa umfundi ngeke asetshenziswe, kukhathala amehlo futhi akusizi ngalutho ebusuku. Ngabe ukhona kini, ochwepheshe, ongangisiza ???? Ngiyabonga
U-Ines wase kusho
I-paperwhite yami entsha (2015) ifaka ukufundwa okuhle. Hhayi kwabanye.
kwenza iminyaka 6
Iyasebenza. Njengoba uchaza kumhlahlandlela, ukuvuselelwa kufezwa ngezinyathelo ezilula kakhulu, ngiyabonga. "I-Kindle Paperwhite (6th Generation) ilethwe enguqulweni engu-5.6.5"
ne ayo kusho
Ingabe sekuvele kwaziwa ukuthi ama-goodreads angafakwa yini esizukulwaneni sokuqala i-Kindle paperwhite (2012) ethengwe eSpain? Ngizamile ukuvuselela isoftware yoMusa wami njengoba usho futhi akusebenzi. Ngiyabonga!
Phendula u-Ane Ayo
u-gerardo durand kusho
I-Amazon ingithumelele i-imeyili ekhombisa ukuvuselelwa okuzenzakalelayo kwe-kindle, angazi ukuthi kwenzekeni, nginezinsuku ezimbili ngixhumene ne-pc futhi kuvela ku-kindle «ngicela ulinde isikhashana ngenkathi i-kindle yakho iqala» futhi ngaphezu kwezinsuku ezimbili kudlulile, Yini engingayenza?
Phendula ku-gerardo durand
Ngingayenza kanjani eyami ukuthi ngine-version 2.5.3?
kwenza iminyaka 2
Sawubona, ngine-Kindle 2.5.8 ene-serial eqala nge-b009… Ngikopisha ifayili le-update .bin, ngenza zonke izinyathelo, kepha alilokothi linike amandla inketho yokuthi «buyekeza i-kindle yakho».
Eqinisweni, lapho ngiyixhuma kabusha nge-usb ngibona lolo hlobo lususe ifayela le-.bin
Noma yisiphi isincomo maqondana nalokhu?
Ithebhulethi yeTagus ingaphansi kuka- € 80, ithebhulethi ethokozisayo ongayifunda
I-Woxter Scriba 190 Pearl, i-eReader esheshayo emakethe
Isilingo Esizwakalayo Sama-Amazon: Ama-audiobooks angama-90.000 +